Ciidamada Suuriya oo ISIS kala wareegay magaalada taariikhiga ah ee Palmyra - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldCiidamada Suuriya oo ISIS kala wareegay magaalada taariikhiga ah ee Palmyra
March 3, 2017 Abdirahman Abdullahi Sheikh World 0
Ciidamada Suuriya oo ISIS kala wareegay magaalada taariikhiga ah ee Palmyra. [Xigashada Sawirka: Reuters]
Dimishiq-(Puntland Mirror) Ciidamada Suuriya ayaa sheegay in ay ISIS kala wareegeen magaalada taariikhiga ah ee Palmyra markii labaad intii lagu guda jiray muddo sanad ah, iyaga oo taageero ka helaya diyaaradaha dagaalka ee Ruushka.
ISIS ayaa Palmyra si lama filaan ah u qabsatay bartamihii bishii lasoo dhaafay ee December kadib markii ay ka baxeen sideed bilood kahor.
“Iyagoo taageero ka helaya diyaaradaha dagaalka Ruushka cutubyo katirsan ciidamadeena ayaa dib u qabsaday magaalada Palmyra,” sidaa ayaa lagu yiri bayaan kasoo baxay ciidamada Suuriya.
ISIS oo bisii Maarso ee sanadkii lasoo dhaafay 2016-ka qabsatay magaalada ayaa burburisay qaybo kamid ah waxyaabihii qadiimiga ahaa ee qiimaha badnaa ee ay lahayd Palmyra.
Magaalada taariikhiga ah ee Palmyra ayaa dhanka waqooyiga kaga beegan caasimada dalka Suuriya ee Dimishiq, waxaana lagu tixgeliyaa magaalooyinka ugu qadiimsan caalamka.
March 8, 2017 Ugu yaraan 30 qof oo ku geeriyootay weerar ay dablay katirsan ISIS ku qaadeen isbitaal milatari oo kuyaala gudaha caasimada Afghanistan ee Kabul
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud ayaa lacag dhan $40,000 u qaadan doona howlgab bil walba, sida uu sheegay masuul katirsan dowladda. Golaha wasiiradda Soomaaliya ayaa shalay oo Khamiis ahayd lacagtaas ku [...]